IPhone Mitambo | Mitambo yakanakisa ye iPhone 6, 5s, 5c, 5, 4s uye 4 | IPhone nhau
Ndeipi mitambo yakanakisa yeiyo iPhone? Zvinoenderana nezvinofarirwa neimwe yega, muApp Store mune mitambo yemarudzi ese, uye kune zviuru zvavo, kune vakawanda vatambi uye neapo neapo vatambi.
Ehezve, nekungotarisa iyo yepamusoro chati isu tichaona inonakidza mitambo iyo wese munhu angafarire.
Kubva kumitambo ye Mascotas kune vese vateereri vakaita BSN kungano Candy Crush Saga, imarii yainogadzira pazuva mukutenga kwakabatanidzwa (pamwe iri iro app raita kutenga kwakabatana mufashoni).
Kana iwe uchida mitambo ye mapuratifomu iwe uchawana akanakisa iwo, kana iwe uchida mitambo RPG kana the Pfura kumusoro unogona kupedza maawa nemaawa, mota, midhudhudhu, zano… Uye zvimwe chete ne iPhone yako.
Isu tinokurudzira edza mimwe yemitambo yanga iri pane yakanyanya kutengesa runyorwa pane mamwe mazuva: CSR Mujaho, Jetpack Joyride, Sky Safari, Monument Valley, Threes, Leo's Fortune, Dots, Bubble Witch Saga 2, Asphalt 8: kuenda neherikoputa, Rayman Fiesta Mhanya, Modern Combat 4: Zero Hour, Kubata Kwevanyengeri, Mapapiro mashoma, Infinity Blade, Zvirimwa vs Zombies uye Cheka tambo… kutanga neavo vawakavimbisa mwedzi yekunakidzwa.
Pano tinokusiira mamwe emakomputa edu
Inonyanya kudhakwa mitambo yemumhanyi isingaperi
Iyo 5 yakanakisa kutyaira mitambo ye iPhone
Iyo inonyanya kufarirwa mitambo ye retrogamers
Dzazvino nhau pamitambo ye iPhone
kubudikidza Ignatius Room inoita 1 mwedzi .
Ubisoft, mugadziri wezita rekuti Rainbox Six, mutambo wehunyanzvi hwekupfura, akasimbisa kuti iri kushanda pane vhezheni yemidziyo…
Alto's Adventure: Mweya weGomo Iye zvino Wave kuwanikwa paApple Arcade
kubudikidza Ngirozi Gonzalez inoita 2 mwedzi .
Apple Arcade inoenderera mberi nekuwedzera kwayo zvishoma nezvishoma. Kunyangwe nekubudirira kushoma, Apple inoramba ichigutsikana kupa iyi kunyorera kwe…
Call of Duty Warzone iri kusvika zvishoma nezvishoma iyo iPhone uye iPad
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 2 mwedzi .
Hapana mubvunzo kuti kusvika kweCall Of Duty Warzone paIOS neAroid zvishandiso kuri…
Hondo Royale 'Apex Legends Mobile' yeIOS ichatanga munyika gumi svondo rinouya
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 3 mwedzi .
Mutambo weApex Legends Mobile uchatangwa svondo rinouya mune dzimwe nyika gumi. Aya angava mashoko akanaka...
The New York Times inowana Wordle kweanopfuura miriyoni imwe yemadhora
kubudikidza Karim Hmeidan inoita 4 mwedzi .
Pane dzimwe nguva dzaunofanirwa kushamiswa nenhau dzese dzakatenderedza nyika yetekinoroji. Isu takaona kuti Apple yakapinda sei…
Fortnite ichadzokera kuIOS kuburikidza neGeForce Zvino
kubudikidza Ignatius Room inoita 4 mwedzi .
Muna Chivabvu 2021, takanzwa nhau dzekuti Fortnite yaizodzokera kuIOS zvisina basa ...
PUBG yaive yekutanga kurwira zita rekusimudzira rudzi urwu pasi rose, kunyangwe H1Z1 yaive yekutanga…
Varume Vatatu Vakachenjera panharembozha yako neaya maapplication
kubudikidza Ignatius Room inoita 5 mwedzi .
Tave kuda kupedza mabiko eKisimusi, mapato achapera zviri pamutemo musi wa6 Ndira, apo ...
Ishe weRings: Hondo inowedzera zviitiko zvishanu kupemberera Kisimusi
Iye anovandudza NetEase anoda kupemberera Kisimusi ino nevatambi vese vezita idzva rebasa raJRR Tolkien ...
Disney naNickelodeon mavara anogara paApple Arcade
Nyamavhuvhu apfuura, chikuva chekunyorera mutambo Apple Arcade, yakapfuura mazana maviri emitambo iripo. Vazhinji ve...
Splitter Critters + ndiro zita razvino rave kuwanikwa paApple Arcade
Pazvairatidza kuti mumavhiki apfuura, Apple yakanga yaisa mabhureki uye nhau muApple Arcade yaive ...